प्रचण्ड–माधव समूहद्धारा तेस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम घोषणा - Halesi Khabar
१२ माघ २०७७, सोमबार १४:५९ ।
काठमाडौँ, १२ माघ । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले सरकारविरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको ठहर गर्दै उक्त समूहले तेस्रो चरणको आन्दोलन र विरोधको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
प्रचण्ड–माधव समूहले भोली १३ गते काठमाडौंमा सिठ्ठी जुलुस गर्ने भएको छ । त्यस्तै, १४ गतेदेखि २१ गतेसम्म माइतीघर मण्डलामा संघीय सांसद र प्रदेश सांसदहरुले निरन्तर धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
काठमाडौं बाहिर विभिन्न ठूला सभाहरुको गर्ने तयारी पनि समूहले गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौंमा २८ गते विरोध प्रर्दशन र सभा गरी तेस्रो चरणको कार्यक्रम समापन गर्ने केन्द्रयि संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बाक्सिलामा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरमा ४५३ सर्वसाधारणको निःशुल्क उपचार
मझुवागढी रणजितमान कप फुटबल प्रतियोगिता ११ बजेबाट शुरु हुँदै
१. दिक्तेलमा सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेनपार्क निर्माण तथा सडक ढलान गर्ने तयारी
२. नेकपा प्रमुख सचेतकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराई
३. पाथेकामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
४. मझुवागढी रणजितमान कप फुटबल प्रतियाेगितामा रतन्छाकाे विजयी शुरुवात
५. बाक्सिलामा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरमा ४५३ सर्वसाधारणको निःशुल्क उपचार
६. मझुवागढी रणजितमान कप फुटबल प्रतियोगिता ११ बजेबाट शुरु हुँदै